तपाईं इन्टरनेटमा आफ्नो पृष्ठ सिर्जना गर्दा, तपाईंले थाहा र क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक नियम र परिभाषा को एक नम्बर सामना गर्न निश्चित हुनेछ। साइट को डिजाइन र भरने गर्न अघि बढ्नु अघि, तपाईं के डोमेन र होस्टिंग को प्रश्न जवाफ पाउन आवश्यक छ। तपाईं विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न सक्छन् र यी अवधारणाहरु सिक्ने समय खर्च छैन। तपाईं अझै पनि एक वेबसाइट बनाउन सबै चरणमा मार्फत जान आफ्नै निर्णय भने तपाईं सिक्न र कठिन काम गर्न धेरै हुनेछ।
सेवा प्रदायक - पहिचान - इन्टरनेटमा र डोमेनमा आफ्नो जानकारी राख्दै लागि मञ्च हो। आफ्नो विकल्प जसको लागि तपाईं एक अनलाइन स्रोत र धेरै पैसा तपाईंले कसरी लगानी गर्न इच्छुक छन् आवश्यक उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। वित्त अहिलेसम्म हामी चाहनुहुन्छ रूपमा राम्रो छ भने, प्रारम्भिक चरण मा यो एकदम निःशुल्क होस्टिंग सन्तुष्ट छ। तर, कम्पनीहरु आफ्नो साइट मा विज्ञापन राख्नेछ एक सेवा तपाईंलाई प्रदान गरेको भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुन। अब तपाईं बाहिर आंकडा गर्न आवश्यक के डोमेन।
फ्रान्सेली (Domaine) मा डोमेन एक एकाइ संरचना सङ्केत गर्छ। इन्टरनेट आफ्नो अद्वितीय नाम हो। सबैलाई प्रत्येक कम्प्युटर डट्स द्वारा विभाजित संख्यात्मक वर्ण हुन्छन् जो आफ्नो ठेगाना, छ थाह छ। डोमेन प्रणाली प्रयोगकर्ता अंक को एक ठूलो संख्या सम्झिन छैन नेटवर्क गर्न आविष्कार भएको थियो। ठेगानाहरू (हरू) यो सिस्टम मा अक्षरहरू (ज्यादातर ल्याटिन) हो, र निम्नानुसार :. छन्। सक्छ थप वा उप-हुन, त्यसपछि ठेगाना को नेटवर्क संरचना हुनेछ: .. । व्यावसायिक परियोजनाको लागि एउटा डोमेन के हो? आफ्नो इरादा इन्टरनेटमा आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन र यस काममा तपाईँ सामेल गर्न चाहनुहुन्छ छ भने, त्यसपछि को पाठ्यक्रम, तपाईं आफ्नो छवि हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
निःशुल्क होस्टिंग तपाईं आफ्नो डोमेनमा, हुनेछ कि लाभ दिन छैन। तपाईं परियोजनामा निवेश पैसा सेवा गुणस्तर कुरा हुनेछ किनभने ग्राहकहरु र साझेदार, तपाईंको मनोवृत्ति कदर हुनेछ। साथै, तपाईंको आफ्नै डोमेन तपाईं रोक्छ हाल छन् जो एक व्यवस्था गर्न गर्दा होस्टिंग चयन गर्न मौका दिनेछु। नाम दर्ता व्यायाम विशेष संगठन, जो नेटवर्कमा पाउन सकिन्छ। म चेक समय डोमेन पारित भएपछि, यो दर्ता गर्न सम्भव छ। कुनै पनि समस्या जाँच भने निराश के - शायद तपाईं खरिद गर्न सक्नुहुन्छ नाम गढा। जो नाम प्रदान गर्न र त्यसपछि तिनीहरूलाई बेच्न यस्तो संगठन, पनि छन्। सबै चरणमा सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि, तपाईंको साइट अद्वितीय नाम देखिन्छ।
डोमेन र होस्टिंग क्रमबद्ध के को प्रश्न। तथापि, आत्म-अध्ययन नेटवर्कमा आफ्नो साइट प्रचार अन्य अवधारणाहरु को एक नम्बर थप परिचित हुनुपर्छ बारेमा प्रश्नहरू लागि। यो आफ्नो व्यवसाय को सफलता निर्भर छ, र इन्टरनेट प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो विकास। सदस्यहरू र सम्पूर्ण समूहहरु रूपमा अधिकारको व्यवस्थापनका लागि एक ठाउँ छ जो विन्डोज डोमेन परीक्षाको। सायद एक दिन आफ्नो व्यवसाय जसको लागि थप शक्तिशाली प्रविधिहरू र वेब-आधारित स्रोतहरू आवश्यक एक विशाल निगम, मा बढ्नेछ।
विषय के हो? अवधारणा र प्रयोग
त्यहाँ एक सेवा "VKontakte" "मेरो अतिथि" छ?
रोचक रहस्य: कसरी अनुयायीहरूलाई हटाउन "VKontakte"?
को गर्भाशय को झुकन। कारण, परिणाम र उपचार
र तपाईं जान्दछन्, Taganrog - रूस वा युक्रेन?
सपना व्याख्या: हराएका बाल हानि बारे चेतावनी
Primordially रूसी र उधारो शब्द: उदाहरण। विदेशी मूल को शब्द
एक आँखा क्रीम चयन
प्रक्रिया, प्रक्रिया र सिफारिसहरू को विवरण: यो MFC एउटा राहदानी जारी गर्न सम्भव छ
बप्तिस्मा अघि Guessing। Enchantments, इपिफ्यानी Name मा आकर्षण र omens
'एएसडी-2' हो। प्रयोगको लागि निर्देशन